Ukwesekwa Kwamakhasimende Okuhle Kakhulu kunamandla okuguqula ibhizinisi | Klever Ezezimali
Ukwesekwa Kwamakhasimende Okuhle Kakhulu kunamandla okuguqula ibhizinisi
Klever ukwesekwa kwamakhasimende kuyisibonelo, kuyashesha futhi kuyafundisa
Ziningi izici ezinomthelela ekudumeni kwamanje nangesikhathi esizayo kwephrojekthi phakathi kwabasebenzisi bayo kanye nabathengi abazoba khona.
Ukuze ibhizinisi likhule futhi liphumelele, izinga eliphezulu lokusekelwa kwamakhasimende liyadingeka. Noma ngabe zisembonini yokudla neziphuzo, ezokuxhumana, noma ezobuchwepheshe bolwazi, izinkampani ezinkulu zidinga ukwesekwa kwamakhasimende ukuze zifinyelele futhi zigcine amakhasimende azo. Bathintana nesevisi yamakhasimende ngemibuzo noma izinkinga ezihlobene nemikhiqizo noma amasevisi.
Kuyini ukwesekwa kwamakhasimende?
Ukwesekwa kwamakhasimende kubhekisela ezinhlobonhlobo zezinsizakalo ezisiza amakhasimende ukuthi asebenzise umkhiqizo noma isevisi ngendlela engabizi futhi efanele. Isevisi yokusekela umkhiqizo ingase ihlanganise ukuhlela, ukufakwa, ukuqeqeshwa, ukuxazulula inkinga, ukunakekela, ukuthuthukisa, nokulahlwa komkhiqizo ngaphakathi nangaphandle kwenhlangano.
Njengoba kushiwo ngezansi, kunezinhlobo ezahlukene zokwesekwa kwamakhasimende ezitholakalayo.
I-Proactive Support Automation: Lokhu kubhekisela ekusekeleni izixazululo ezizenzakalelayo ezinciphisa isikhathi sokuphumula futhi zinike amandla ukutholakala okungu-24×7. Lokhu kufezwa ngokulandelelwa kokuhlolwa kwezempilo njalo ngezinqubo zokuxilonga ukuze kunikwe amandla ukuqapha udaba nokuxazulula izinkinga. Amasu okuhlaziya asafufusayo afaka ukufunda komshini nokucabanga komshini kuphinde kunikeze amandla amandla okusekela asebenzayo.
I-Preemptive Support Automation: Lokhu kubhekisela kusixazululo esisekelayo esisebenzisa ulwazi olukhiqizwa noma oluqoqwe ngohlelo lokusebenza noma isevisi, isb. amafayela okungena ngemvume, imibuzo egciniwe egciniwe, izinguquko zokumisa, njll. Lolu lwazi lungabese lusetshenziswa ukuze kubikezelwe ukucekelwa phansi noma ukuphazamiseka. Isiphetho salokhu izinga eliphezulu lesevisi/ukutholakala kwesicelo sohlelo lokusebenza oluyisisekelo. Imisebenzi yokulungiselela isize izinhlangano ezisezingeni eliphezulu ukuthi zilawule izindleko nolwazi lwamakhasimende luye kumazinga amasha, ukwakha ukwethenjwa nokwethembeka kwekhasimende. Umphumela wokucatshangelwa ukuqhubekela phambili kwesevisi enhle nomthelela wokusebenza ekuziphatheni komkhiqizo oqondisiwe.
Izinhlangano zisebenzisa I-Self Support Automation ukuhlinzeka izinhlaka zabo zokusekela ngemitapo yolwazi eku-inthanethi, amathuluzi, nezixazululo zokuxazulula izinkinga ezingaxilonga futhi zixazulule izinkinga nezigameko ngokuzenzakalelayo nangokunembile. Iningi lezinhlangano manje seligxilise ama-chatbot nabasizi bedijithali kumawebhusayithi abo njengobuchwepheshe obusafufusa bokuzisiza.
Nakuba bonke lobu buchwepheshe bungenziwa ngokuzenzakalelayo, bekungeke kwenzeke ngaphandle kwabasebenzi abakhuthele namalungu eqembu lenhlangano ukuqinisekisa ukuthi okulethwayo kufinyelela ikhasimende noma umsebenzisi njengoba kuhleliwe. KleverUmnyango Wezokusebenza Kokusekela Abathengi uphethwe futhi uphethwe indoda yaseDutch ekhuluma ngokushesha okuthiwa uMathijs Bok.
UMathijs angakwazi ukuxazulula izinkinga ngokushesha ngenxa yokucabanga kwakhe okusheshayo. Uphethe iqembu lomhlaba wonke labantu abangu-13 abahlakaniphile, abahlakaniphile, abasheshayo futhi abasebenza 24/7 njengamarobhothi ethu e-AI, futhi ngempela umphathi omuhle. Noma nini lapho amakhasimende abo enezinkinga, aphendula ngokushesha nangemininingwane eminingi.
Isikhathi sokuphendula ithikithi ngalinye eliphakanyiswe yiqembu singaphansi kwemizuzu emithathu, okubenza babe abangcono kakhulu esikhaleni se-crypto. Ngaphezu kwamathuluzi angenhla azenzakalelayo, aphinde axhumane nazo zonke izinkundla zethu zenkundla yezokuxhumana ukuze alandelele futhi aphendule ezindabeni ezikhathazayo ngokushesha okukhulu. Ngaphandle kokuphatha amathikithi angaba ngu-2000 ngenyanga kanye nezingxoxo ezingu-750 ngenyanga, siphinde siqinisekise amazinga okwaneliseka angu-94% kuwo wonke amathikithi aphakanyiswa abasebenzisi bethu emhlabeni jikelele.
Igrafu engezansi ibonisa ukuthi abasebenzisi baxhumane kanjani nomnyango wokwesekwa kwamakhasimende ezinsukwini ezingu-90 ezedlule, 53% ithikithi lewebhu, 29% ithikithi le-imeyili, 17% ngengxoxo.
Umnyango wokwesekwa kwamakhasimende we Klever kubonakala sengathi unamandla angaphezu kwawomuntu amanye amarobhothi angeke afane nawo. Ngendlela ebabazekayo, ithimba lixazulule u-53% wamathikithi phakathi nosuku olu-1 kanye nama-43% emahoreni angama-24-72.
Ngenxa yalokho, Klever abasebenzisi bayaqinisekiswa ukuthi noma nini lapho kunenkinga noma ukukhathazeka, omele isevisi yamakhasimende uzoba khona phakathi nemizuzu ukuze abasize.
Sazise ukuthi ucabangani ngayo KleverIzinkonzo ezinhle kakhulu?
Isilinganiselwa: 5 Amavoti: 7
Umthandi oshisekayo we-crypto kanye nesintu onomqondo osebenzayo wokwenza okuqukethwe ukufundisa wonke umuntu ngaphakathi kwendima yami yethonya. Usomabhizinisi onenhliziyo evulekile ukuhlalisa abantu abasha abafisa ukwenza okusemandleni abo endaweni yomhlaba.